कपालमा चाँया परेको छ ? यसरी गर्नुहोस उपचार | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalकपालमा चायाँ परेको छ ? यसरी गर्नुहोस उपचार
Home स्वास्थ्य कपालमा चाँया परेको छ ? यसरी गर्नुहोस उपचार
कपालमा चायाँ पर्नु हिजोआज सामान्य समस्याको रुपमा देखापरेको छ । यस्तो लाग्छ कपालको सबैभन्दा ठूलो शत्रु नै चायाँ हो ।
कपालमा चायाँ पर्दा मानिसको व्यक्तित्वमा समेत नराम्रो प्रभाव पर्न गएको हुन्छ । मानिस जती नै स्वस्छ तथा सुन्दर भएर हिडेको नै किन नहोस् तर उसको कपालमा देखिने चायाँले लाजमर्दो समेत बनाउन सक्छ । कपालमा चायाँ पर्नु भनेको कपालको समस्याले नभई छालाको समस्याका कारण उत्पन्न हुने समस्या हो ।
कपालमा हेयर फोलीकको छेउमा सिवेसीयस ग्रन्थी रहेको हुन्छ । चायाँ भनेको सिवेसियस् ग्रन्थीबाट निस्कने एक प्रकारको पदार्थ हो । जसलाई सिवोरीया क्यापिटिज भनिन्छ । यसले कहिलेकाहीँ छालामा पनि असर गर्छ । यदि छालामा असर गर्यो भने यसलाई सिवोरीस डर्माटाइटिस भनिन्छ । जसले गर्दा कपालमा कत्ला जस्तो भएर बस्ने हुन्छ । सिवोरीयामा ‘मालेसिसेज फरफर’का साथै ‘पिटाइरोप्रोरीयम ओभल’को विकास भएर पनि हुन्छ । यसले गर्दा मानिसको कपालमा चायाँ पर्ने हुन्छ ।
टाउकोमै किन चाँया पर्छ भन्ने प्रश्न सबैको मनमा रहेको हुन्छ । किनभने टाउकामै धेरै मात्रामा कपाल रहेको हुन्छ । जसका कारण सिवेसियस ग्रन्थी पनि बढी मात्रामा रहेको हुन्छ । टाउकोमा कपाल र ग्रन्थी धेरै हुने हुँदा शरीरका अन्य भागको तुलनामा कपालमा धेरै चाँया पर्ने हुन्छ ।
एक वर्षभन्दा कम उमेरको वच्चामा पनि यस्तो समस्या हुनु सामान्य हो । बच्चामा चाँया टोपी जस्तो बनेर बस्ने हुँदा यसलाई ‘क्याडल क्याप’ पनि भनिन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा हर्मोनका कारण १२/१३ वर्षको उमेरमा चायाँ देखिन थाल्छ साथै, सिवेसियस ग्रन्थी कै कारण डण्डीफोर पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कपालमा चिल्लो पदार्थ बढी मात्रामा देखिन्छ । र कपालमा चाँया प्याचप्याच भएर आएको हुन्छ । यो चाँया नभएर दाद पनि हुन सक्छ । त्यसैले बच्चामा आउने चायाँलाई छुट्टाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो मानिसमा पनि टाउकोको सोरियासिससँग छुट्टाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । चायाँ टाउकोबाहेक आँखीभाउ, आँखाको ढकनी वरिपरि तथा नाकको छेउछेउमा समेत देखिन्छ । यसले कहिलेकाहीँ कानको पछाडी भागलाई पनि असर पारेको हुन्छ । रौंको मात्रा दारीमा पनि हुने हुदा यसको समस्या कसैकसैलाई दाह्री, जुँगामा पनि रहेको हुन्छ ।
यसमा आफै पनि बन्नसक्ने र कपालबाट झरेर पनि हुनसक्छ । यसले छालालाई असर गरेमा सिवोरिस डर्माटाइटिस भएर छाती र ढाडमा पनि आउन सक्छ । कहिलेकाहीँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास भएर पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यसको लागि एन्टी फङ्गल किटोकोटाजोल जस्ता स्याम्फूहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सेलिसेलिक स्याम्पू बच्चामा एक प्रतिशत र वयस्कमा २ प्रतिशत प्रयोग गर्दा राम्रो मानिन्छ । एक वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाको लागि वेवि सेम्फुको प्रयोग गर्न सकिन्छ । चायाँ अलि बाक्लो भरएर बसेमा हल्का मिनरल तेल लगाएर पनि निकाल्न सकिन्छ । साथै समस्या धेरै देखिएमा एन्टी फङ्गल औषधीको सेवन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।